Bulls များသည် ဤ Resistance ကိုရှင်းလင်းပါက Bitcoin ပြန်လည်စတင်နိုင်သည် - Token Myanmar
Bitcoin သည် US ဒေါ်လာနှင့် $20,000 ဇုန်အထက်တွင် စုစည်းနေသည်။ BTC သည် မဝေးတော့သောကာလတွင် ပြန်လည်စတင်ရန် $20,800 ခုခံမှုကို ရှင်းရပါမည်။
Bitcoin သည် အမြတ်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး $19,800 ပံ့ပိုးမှုဇုန်ကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
စျေးနှုန်းသည် ယခု $20,000 အဆင့်နှင့် တစ်နာရီလျှင် ရိုးရိုးရွေ့လျားပျမ်းမျှ 100 အထက်ဖြစ်သည်။
BTC/USD အတွဲ (Kraken မှဒေတာအစာကျွေးခြင်း) ၏ နာရီအလိုက် ဇယားတွင် $20,550 အနီးတွင် ခုခံမှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အဓိက bearish trend line တစ်ခုရှိသည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည် $20,550 နှင့် $20,800 ခုခံမှုအဆင့်များကို ရှင်းလင်းပါက အဆိုပါအတွဲသည် တက်ကြွသောအရှိန်အဟုန်ကို ရရှိနိုင်သည်။
Bitcoin စျေးနှုန်းသည် ခုခံမှုကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။
Bitcoin စျေးနှုန်းသည် $21,700 နှင့်အထက် အရှိန်မတက်နိုင်ခဲ့ပါ။ ပြင်ပေးရခြင်း. $21,000 ပံ့ပိုးမှုဇုန်အောက်တွင် အကျဘက် ပြုပြင်မှု ရှိခဲ့သည်။
စျေးနှုန်းသည် $17,600 swing အနိမ့်မှ $21,700 အမြင့်ဆုံးသို့ အတက်ရွှေ့ခြင်း၏ 23.6% Fib retracement အဆင့်အောက်တွင် ကျဆင်းသွားသည်။ ဝက်ဝံများသည် $20,500 ပံ့ပိုးမှုဇုန်နှင့် တစ်နာရီလျှင် ရိုးရိုးရွေ့လျားပျမ်းမျှ 100 အောက်စျေးနှုန်းကိုပင် တွန်းပို့ခဲ့သည်။
သို့သော်၊ နွားများသည် $19,650 နှင့် $19,800 ထောက်ပံ့မှုအဆင့်များထက် တက်ကြွနေပါသည်။ Bitcoin သည် $17,600 swing အနိမ့်မှ $21,700 swing အမြင့်ဆုံးသို့ အတက်အဆင်း၏ 50% Fib retracement အဆင့်အထက်တွင် ရှိနေပါသည်။
ယခု ဒေါ်လာ ၂၀,၀၀၀ အဆင့်ထက်ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်သည်။ တစ်နာရီလျှင် ရိုးရိုးရွေ့လျားပျမ်းမျှ 100. အတက်ဘက်ရှိ ချက်ခြင်းခုခံမှုသည် $20,550 အဆင့်အနီးတွင်ရှိသည်။ BTC/USD အတွဲ၏ နာရီအလိုက် ဇယားတွင် $20,550 အနီးတွင် ခံနိုင်ရည်ရှိမည့် အဓိက ကျဆင်းနေသော လမ်းကြောင်းသစ်လိုင်းလည်း ရှိပါသည်။
ပထမဆုံးအဓိကခုခံမှုမှာ $20,800 အဆင့်အနီးတွင်ဖြစ်သည်။ $20,800 အဆင့်ထက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရွေ့လျားမှုသည် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော တိုးမြင့်မှုကို စတင်နိုင်သည်။ နောက်ထပ်အဓိကခုခံမှုမှာ နွားထီးများသည် ပုံမှန်တိုးလာရန်အတွက် ခွန်အားရနိုင်သည့်အထက် $21,220 အဆင့်အနီးတွင် တည်ရှိသည်။
bitcoin သည် $20,800 resistance zone ကိုရှင်းလင်းရန်ပျက်ကွက်ပါက၊ ၎င်းသည်နောက်ထပ်ကျဆင်းမှုစတင်နိုင်သည်။ အားနည်းချက်ရှိချက်ချင်းပံ့ပိုးမှုမှာ $20,200 အဆင့်နှင့် 100 hourly SMA အနီးတွင်ရှိသည်။
ပထမဆုံး အဓိက ပံ့ပိုးမှုမှာ $20,000 အဆင့် အနီးတွင် ဖြစ်သည်။ အဓိကပံ့ပိုးမှုမှာ ယခု $19,650 အဆင့်အနီးတွင် ရှိနေသည်။ $19,650 ပံ့ပိုးမှုအောက်တွင် ကျဆင်းသွားခြင်းသည် မဝေးတော့သောကာလတွင် ကျဆင်းမှုကို ပြန်လည်စတင်နိုင်သည်။ ဖော်ပြပါအခြေအနေတွင်၊ စျေးနှုန်းသည် $ 18,800 အဆင့်သို့ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။
နာရီအလိုက် MACD – MACD သည် ယခု တိုးတက်မှုဇုန်တွင် အရှိန်ရနေပြီဖြစ်သည်။
နာရီအလိုက် RSI (နှိုင်းရအင်အားအညွှန်းကိန်း) – BTC/USD အတွက် RSI သည် ယခုအခါ အဆင့် 50 အထက်ဖြစ်သည်။
အဓိကပံ့ပိုးမှုအဆင့်များ – $ 20,000 နှင့်နောက်တွင် $ 19,650 ။
Major Resistance Levels – $20,800, $21,220 နှင့် $21,700။